Umatshini wokuthengisa uthatha ingqalelo kukukhula kwintengiso yentengiso ekrelekrele kunye neemodeli zeshishini ezahlukeneyo. -Iindaba zeshishini-Hunan Zhonggu Science and Technology Co, Ltd.
Umatshini wokuthengisa uye wagxila kuphuhliso kwintengiso yentengiso ekrelekrele kunye neemodeli zeshishini ezahlukeneyo.
kwizimvo:16 umbhali: Ixesha lokushicilela: 16 imvelaphi:
Ngendlela "yokuthengisa okungagunyaziswanga" egqugqisa kwihlabathi liphela, oomatshini abathengisayo abanengqiqo bajolise ekuphuculweni kwintengiso ekrelekrele kunye neemodeli zabo zeshishini ezahlukeneyo kunye nezibonelelo zokuthatha indawo encinci nokusebenza kakuhle.
Ixesha lokuthengisa elinengqondo: ubuchule bokuhlalutya idatha yokusebenza, Lungiselela ukhetho, ukunciphisa iindleko zokubonelela kunye nokubonelela abathengi ngeemveliso ezixabisa kakhulu ngokuthelekisa imimandla, abathengi kunye nolawulo lodidi olufakiwe.
Ixesha elitsha lokuthengisa: senza AI(kukubhadla okungeyonyani) ikhonsoli yethu, yenze ibe yeyakho kwaye uyiyeke ukusebenzisana kwelizwi isikhokelo sentlawulo, Impendulo emva kwentengiso kwaye eminye imisebenzi kubandakanya ukubeka iliso kwi-AI, clever ulawulo lobushushu, non-Ukuhambisa umonakalo. COosomashishini abangenakubalwa kunye namaziko otyalo mali athengiselwe kwimarike yentengiso engahlali bantu Nje ukuba umbono wenkqubo entsha yokuthengisa ubekwe phambili, kunye nemarike yomatshini wokuthengisa yaqhubeka ikhula ngokuqinileyo ngokuchasene the umkhwa.
Ngaphambili: Yintoni imbonakalo yokuthengisa kwimakethi yomatshini?
Okulandelayo: Oomatshini bokuthengisa abenzekileyo baye baba yeyona ndima iphambili yexesha lokuthengisa elingenamntu.